စိတ်ကြွစရာ – Grab Love Story
ရပ်ကွက်ကို ကျော်ပြီး လူပျက်တဲ့ပါတ်လမ်းလေးအတိုင်း ယဉ်ယဉ်နွယ် လျှောက်လာလိုက်သည်။ ညနေငါးနာရီခန့်အချိန်မို့ တိတ်ဆိတ်မှုဟာ သူမကိုခြောက်ခြားစေပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်း နှစ်ကျောင်းကို ကျော်ပြီး လမ်းချိုးလေးအတိုင်းချိုးကွေ့လိုက်တော့ တွေ့ပါပြီ ခြံဝန်းကျယ်တွေနဲ့ တိုက်အိမ်ကြီးတွေ။ အိမ်တွေနဲ့ နီးလာလေ ဆရာမလေး ရင်တွေတုန်လာလေပါပဲ။ ကျောင်းကတန်းလာရသည်မို့ အဖြူအစိမ်းဝတ်စုံလေးပင် မလဲနိုင်။ လက်က ဆွဲခြင်းလေးနဲ့ ထားဝယ်ကြိမ်လုံးလေးပင်အစစ်ပါလာသေးသည်။
တစ်ကယ်ဆိုဒီအသိုင်း အဝိုင်းနှင့်သူမ လာလားမှမသက်ဆိုင်ပါ။ သို့ပေမဲ့ သူမရဲ့အလှတရားက ဂြိုလ်မွှေခဲ့သည်။ ဒီအသိုင်းအဝိုင်းက ကောင်လေးတစ်ယောက်ှူမအလှမှာ ငြိတွယ်ခဲ့ဖူးသည်။ အချစ်ရေးအချစ်ရာမှာ အတွေ့အကြုံနည်းတဲ့ကျွန်မ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ အပြောခံရမှာ စိုးရိမ်တဲ့စိတ်နဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ငြင်းခဲ့ဖူးသည်။ အကျဉ်းခြုံလိုက်ပါစို့ ။ ထိုကောင်လေး ကွကိုယ်သတ်သေလုပ်သွားသည်။ ထိုသတင်းကြားကြားခြင်းသူမ စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ တိုက်ခန်းမှာတစ်ယောက်ထဲနေတယ်ဆိုတဲ့အသိကယ် ပါတ်ဝန်းကျင်ကို ကြောက်တာရယ်ပေါင်းပြီး သူမလုပ်မိတဲ့အမှားအတွက် လိပ်ပြာမလုံဖြစ်မိပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်ကာလမှာ သူမမဘဝထဲ ကောင်လေးတစ်ယောက်ထပ်ဝင်လာတယ်။ မင်းထင်တဲ့ ။ သူ့အပြောတွေ မှာ သူမသာယာသွားတယ်ပေါ့။
တစ်နေ့သူနဲ့ ကော်ဖီအတူသောက်ပြီးသူက သူမကို တိုက်ခန်းပြန်လိုက်ပို့တယ်။ လမ်းတစ်ဝက်မှာတင်ယဉ်ယဉ်နွယ်အိပ်ပျော်သွားတယ်။ နောက်မနက်မှာ တွေ့လိုက်ရတာက သူမဖုန်းထဲက ဝတ်လစ်စလစ်နဲ့ သူမပုံတွေပဲ။ သူမ မင်းထင်နဲ့ဖုန်းပြောဖြစ်တယ်။ မင်းထင်ဟာသူမငြင်းလိုက်လို့ လုပ်သွားသူရဲ့ ညီတဲ့ ။ သူက သူမကို ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ အကျပ်ကိုင်တယ် ။ သူမကို အမိန့်တွေပေးတယ် ။ သူ့အကို အတွက်လက်စားခြေဖို့ပေါ့။ ခြံနာပါတ် (5) သူမ လူခေါ်ဘဲလ်လေးတီးလိုက်တယ် ခဏကြာတော့ အင်းထင်က ထွက်လာပြီးတံခါးဖွင့်ပေးတယ်။ အိမ်ထဲရောက်တာနဲ့ ခြံတံခါးကော အိမ်တံခါးကော အထဲက သော့ခါတ်လိုက်တယ်။ စားပွဲတစ်ခုခြားပြီး မင်းထင်နဲ့ ယဉ်ယဉ်နွယ် မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်နေတယ်။ ကျွန်မကို ဘာအတွက်ခေါ်လိုက်တာလဲ……. စူးရဲတဲ့ အကြည့်တွေကို ရှောင်ရင်း ယဉ်ယဉ်နွယ် မေးလိုက်တယ်။ မင်းမှာမေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူး………. သူမအပေါ် သူတစ်မျိုမျိုး အကျပ်ကိုင်အနိုင်ကျင့်လောက်သည်ဟုတွေးပြီးသားပါ။ ဒီနေ့ကစပြီး မင်း ငါခိုင်းတာတွေလုပ်ဖို့ အသက်ရှင်ရမယ်…..။ သူမခေါင်းကို ငုံ့ထားမိပါသည်။
မင်းထင် ထပြီးအပေါ်ထပ်ကို တတ်သွားသည်။ မကြာခင်မှာပဲ အိတ်ကလေးတစ်လုံးကိုင်ပြီး ပြန်ဆင်းလာသည်။ သူမစီထိုအိတ်ကို ပစ်ပေးလိုက်သည်။ ပေါင်ပေါ်ကျလာတဲ့ အထုတ်ထဲက သံသံခြင်းထိခါတ်သံတွေကြားရသည်။ သူက သူမအနောက်မှာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ခါးကိုကိုင်းကာ သူမနောက်ကနေကပ်ပြီးပြောသည်။ နိုင်ငံခြားမှာ ငါ့အကိုသတင်းကြားကတည်းက မင်းအတွက်ရည်စူးပြီးဝယ်ထားတာလေ ဖွင့်ကြည့်ပါဦး….။ ယဉ်ယဉ်နွယ် တုံယင်နေသောလက်ဖြင့်အိတ်ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။ လက်ထိပ်တွေ သံကြိုးတွေ သူမမျက်လုံးပြူးမျက်ဆံပြူးဖြင့် နားမလည်စွာလှည့်ကြည့်သည်။ မင်းမိသားစု အရှက်မကွဲစေချင်ရင် ဒီနေ့ကစပြီး ငါခိုင်းသမျှလုပ်ပြီး ငါလုပ်သမျှခံရမယ် ယဉ်ယဉ်နွယ်…..။ သူကပြောပြီး သူမခြင်းလေးထဲက ကြိမ်လုံးကို ယူကာ ဒါမင်း ကျောင်းမှာ မင်းတပည့်တွေကို ရိုက်တဲ့ ကြိမ်လုံးလား……….။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဆိုးတာပဲ ဒီကြိမ်လုံးနဲ့ မင်းအရိုက်ခံရတော့မယ်။ ကြားလိုက်ရတဲ့စကားကြောင့် သူမစိတ်တွေအပြင်းအထန်လှုပ်ရှားသွားသည်။ သူမတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ အရိုက်မခံဘူးပါ။
တပည့်တွေကိုလဲ သိပ်ရိုက်လေ့မရှိ ကြိမ်လုံးကို ခြောက်လှန့်ရုံသာသုံးသည်။ အခု သူမကို ရိုက်မည်တဲ့ ။ ပိုင်စိုးပိုင်နင်း အပြောအဆိုတွေမှာ သူမသိမ်ငယ်မိသည်။ လက်ရှိ သူမက သူ့ပိုင်နက်ထဲမှာ ။ ကျားရှေ့က ယုန်သူငယ်ပင်ထွက်ပြေးခွင့်ရှိသေးသည်။ သူမက လည်စဉ်းခံရုံသာ….။ အရိုက်မခံချင်ရင် လိမ်လိမ်မာမာနေပေါ….. မတ်တပ်ရပ်လိုက်စမ်းပါ ယဉ်ယဉ်နွယ်။ ငါ့အကိုကို ဖမ်းစားသွားတဲ့ အလှတရားတွေကို ငါကြည့်ချင်လို့……… အေးစက်စက် အမိန့်သံနဲ့ ခိုင်းစေမှုကြောင့် သူမသူ့ကို ပြန်ကြည့်မိသည်။ မရယ်မပြုံးမမဲ့သော ရုပ်သွင်က ပကတိ အေးစက်နေသည်။ သက်ပြင်းကိုချရင်း ယဉ်ယဉ်နွယ် မတ်တပ်ထလိုက်တယ်။ ကျောင်းဝတ်စုံအောက်က စွဲမက်ဖွယ် သူမရဲ့ အလှတရားတွေကို သူက တစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေသည်။ ဝှစ် ရွှမ်း……..အ ဝှစ်ကနဲ အသံတစ်ချက်နဲ့ သူမတင်ပါးပေါ်ကျလာတဲ့ စပ်ဖြင်းဖြင်း နာကျင်မှုကြောင့် သူမကိုယ်လေး ဆက်ကနဲပင်တုန်သွားသည်။ နာကျင်သွားသော တင်ပါးကို လက်နဲ့ပွတ်သပ်ဖို့ပြင်မိပေမဲ့ သူမရဲ့ လက်ကောက်ဝတ်လေးကို မင်းထင်က လမ်းတဝက်မှာပဲ ဖမ်းဆုပ်ကာ……. မင်းလက်တွေကို ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီး အရိုက်ခံတာ မင်းအတွက် ပိုသက်သာလိမ့်မယ် ယဉ်ယဉ်နွယ်……….. ပြောပြီး သူက သူမလက်တွေကို ပြန်လွှတ်ပေးသည်။
သူမခေါင်းငုံ့တိတ်ဆိတ်နေမိသည်။ ခုံတွေနဲ့ ရှုပ်နေတဲ့ ဒီဘက်ကိုလာခဲ့………….။ သူ့ရဲ့အမိန်သံအတိုင်း ဘေးဘက်နေရာလွတ်သို့ထွက်ကာ မတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်။ လက်နှစ်ဖက်ကိုလည်း တင်ပါးကို ပွတ်သပ်တာမျိုးထပ်မလုပ်မိအောင် လက်ပိုက်ထားလိုက်သည်။ ခုမှ ဆရာမလေးယဉ်ယဉ်နွယ် တစ်ယောက် အပြစ်လုပ်ထားတဲ့ ကျောင်းသူတစ်ယောက်နဲ့ပိုတူသွားတယ်။ မင်းထင်က ယဉ်ယဉ်နွယ်ရဲ့ တင်ပါးကို ချိန်ပြီး လက်ကို လွှဲရိုက်လိုက်သည်။ ရွှမ်း ရွှမ်း ရွှမ်း ရွှမ်း………. မအော်မိအောင် အံကို ကျိတ်ထားလိုက်သည်။ မျက်ရည်ကတော့ ကျလာသည်။ ၁၀ချက်လောက်ရိုက်ပြီးတော့ရပ်လိုက်သည်။ ငါ့နောက်လိုက်ခဲ့……….. ပြောပြီး အရှေ့ထွက်သွားတဲ့သူ့နောက်လိုက်ခဲ့ရတယ်။ ဒီအချိန်သူမလုပ်နိုင်တာ ဘာမှမရှိဘူးလေ။ သူကျွန်မကို ခေါ်သွားတာက အပေါ်ထပ်က အခန်းကကျဉ်းလေး တစ်ခုစီ။ အခန်းထဲမှာ အခန်းထောင့်က စားပွဲတစ်လုံးရယ် အခန်းအလယ်က ကြမ်းပြင်မှာ အသေတပ်ထားတဲ့ စတီးခုံ တစ်လုံးရယ်ကလွဲ ဘာမှမရှိဘူးလေ။ ရော့……….. အိတ်တစ်လုံးကို ပြစ်ပေးသဖြင့် အသည်းအသန်ဖမ်းလိုက်ရသေးသည်။ အဲ့ထိုင်ခုံပေါမှာမင်းကို မင်း အဝတ်အစားတွေချွတ်ပြီး ကြိုးတုပ်ထားလိုက် …….. ရှင်……….. မလုပ်ချင်လည်းရပါတယ် ငါပြန်လာတဲ့အခါ ထပ်ပြီးအရိုက်ခံလိုက်ပေါ့…………။ ပြောပြီးတံခါးကို အပြင်က ပိတ်ကာထွက်ခွာသွားသည်။ ကျွန်မအခန်းကို သေချာသတိထားလိုက်ကြည့်သည်။ ပြတင်းပေါက်တစ်ခုရှိပြီး သံတိုင်တွေအသေတပ်ထားသည်။ဒါတင်မက ခုံရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင် တံခါးပေါက်မှာလဲ က်ိလုံးပေါ်မှန်တစ်ချပ်။ ကျွန်မဘာလုပ်ရမလဲ………….. သူခိုင်းတာနာခံရုံကလွဲပြီး ဘာလုပ်ရမလည်း ကျွန်မမသိ။ ကျွန်မတင်ပါးတွေကလည်း ထပ်အထိမခံနိုင်အောင် ကျိန်းစပ်နေပြီ။ မတတ်နိုင် ။
ပေါက်တဲ့နှဖူး မထူးဟုတွေးကာ အဖြူအစိမ်းပို ချွတ်ပြီး စားပွဲပေါ်ခေါက်တင်လိုက်တယ်။ အောက်ကဝတ်ထားတဲ့ အတွင်းခံတွေကောပေါ့။ အခန်းထဲ ဘယ်သူမှမရှိပေမဲ့ ကျွန်မတစ်ယောက်ထဲလိပ်ပြာမလုံဖြစ်နေမိသည်။ သူပေးတဲ့အိတ်ကို ဘေးနားချကာ ခုံပေါ်ကျွန်မထိုင်လိုက်သည်။ အ……နာကျင်မှုကြောင် ကျွန်မညည်းမသည်။ မတတ်နိုင် ကျိတ်မှိတ်ထိုင်ပြီး အိတ်ထဲက ကြိုးတွေကို ထုတ်ကာ ထိုင်ခုံရဲ့ တိုင်နှစ်ဖတ်မှာ ကျွန်မခြေကျင်းဝေတွေကို တွဲချည်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ စတီးလက်ထိပ်ကလေး။ လက်ထိပ်ကလေးကျု ကျွန်မသေချာကြည့်မိသည်။ ဒီလက်ထိပ်လေးနဲ့ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မခက်ပြီးသွားရင်……….. သက်ပြင်းချ မျက်စိစုံမှိတ်ကာ ထိုင်ခုံရဲ့ နောက်မှီကို ကျော်ပြီးလက်ကောက်ဝတ်တွေကို လက်ပြန်လက်ထိပ်ခတ်လိုက်သည်။ ဂျောက် ဂျလောက် ပြီးပြီ။ မင်းထင်နှိပ်ဆက်သမျှ ငြိမ်ခံရုံသာ ကျန်တော့သည်။ စောင့်ရတာအချိန်ကြာလာသည် နှင့်အမျှ ရင်အစုံက မောဟိုက်တုန်ယင်နေပြီ။ ကျွန်မ ဘဝကလည်း ကိုယ့် ကိုကိုယ် မလှုပ်နိုင်အောင်တုပ်နှောင်၍ အနှိပ်ဆက်ခံဖို့ထိုင်စောင့်နေရတဲ့ ဘဝ……….။ မျက်နှာချင်းဆိုင်က မှန်ထဲမှာ သနားစဖွယ်ကိုယ့်ပုံရိပ်ကို မြင်နေရသည်။မကြည့်ရဲသဖြင့် မျက်လုံးလွှဲမိသည်။ ကျွနိတော်အခန်းတံခါးကို ဖွင့်ဝင်လိုက်တာနဲ့ ထိုင်ခုံမှာ အချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့ ယဉ်ယဉ်နွယ့်ကို သနားစဖွယ်တွေ့ရတယ်။
နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ ရင်အစုံကြောင့် သူမစိတ်လှုပ်ရှားနေမှန်း သိရလို့ကျေနပ်မိသည်။ သူမတစ်ကိုယ်လုံး မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းပေမဲ့ ဆံပင်တွေကတော့ဆံထုံးထုံးထားတုန်း။ ဒါကြောင့် သူမရဲ့ မျက်နှာလေးက ရှင်းသန့်နေတုန်း။ သူမက တော်တော်လှတဲ့အမျိုးသမီးပဲ……….။ သူမကို ကျွန်တော် ဘာလုပ်သင့်လဲ။ ကျွန်တော်ဝင်လာတာသိတော့ သူမဆက်ကနဲမော့ကြည့်သည်။ ရှင်ကျွန်မကို ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ………… သူ့နားနား ကပ်ပြီးသူ့မေးခွန်းကို ကျွနိတော်တိုးတိုးလေးဖြေလိုက်တယ်။ ငါ့အကိုကို သက်ခဲ့တဲ့ မင်းအလှအားလုံးကို ငါယူမှာ……. သူမဆက်ခနဲဖစ်သွားပြီးရုန်းတယ်။ ကြမ်းပြင်နဲ့အသေတပ်ထားတဲ့ ခုံပေါ်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ့်တုပ်နှောင်ထားတဲ့သူမ လှုပ်ပင်မလှုပ်နိုင်ရှာ။ အရာရာကို အောင်နိုင်သူတစ်ယောက်လိုမပြုံးနဲ့ အလှူပေးထားသလိုဖြစ်နေတဲ့ သူ့ရင်အုံနုနုကို လက်ဖဝါးနအုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်လိုက်တယ်။ မထိတထိခံစားမှုအပေါ် အပျိုစင်ဆရာမလေးအသဲယားနေပုံရသည်။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ဆက်ကနဲ ဖျစ်ညစ်လိုက်တော့ သူမ နာကျင်စွာအော်ရှာသည်။ အော်သံမထီက်နိုင်အောင် သူမရဲ့နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို ငုံနမ်းလိုက်သည်။ ဒီထက်နှိပ်စက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပေမဲ့ သူမအလှမှာ ကျွနိတော်ငြိတွယ်သွားပြီး ထင်တယ်။
သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျွန်တော်အလိုရှိသလို အသုံးချလိုက်နေမိသည်။ ပြီးတော့ သူမကိုထိပ်တွေဖြုတ်ပေးလိုက်သည်။ အနှောင်အဖွဲ့မှလွတ်သော်လည်း အားနည်းနေသူလို သူမ ကြမ်းပြင်ပေါ်လဲကျသွားသည်။ သူမကို ကျွန်တော်မညှာမတာ လိင်ဆက်ဆံဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့မင်းခွင့်ယူလိုက်။ ကျွနိတော့အသံကြောင့် ကျောင်းစိမ်းထဘီကို ရင်လျှားထားတဲ့သူမ သူမမော့ကြည့်သည်။ သန်ဘက်ခါ မင်းနဲ့ငါနဲ့ ရုံးတတ်လက်မှတ်ထိုးမယ် ။ဒီနေ့ ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေပြင်ရမယ်။ ရှင်……. သူကျွန်တော့်ကို ကြောက်လန့်တကြားမော့ကြည့်သည်။ ကျွန်မ………. အထွန့်တန်ချင်နေတဲ့ သူမရဲနှုတ်ခမ်းတွေကို ကျွနိတော်ငုံနမ်းလိုက်တယ်။ ဒီနေ့ကစပြီး ငါ့စကားတွေကို မင်းပြန်ပြောတဲ့စကားက ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတာပဲဖစ်နေရမယ် ယဉ်ယဉ်နွယ်……. ငါစီစဉ်သမျှ မင်းမငြင်းရဘူး……… သူမကျွန်တော့ကို အကြာကြီးငေးကြည့်သည်။ ပြီးတော့ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်…….ဟုပြောပြီး မျက်လွှချသွားသည်။ အဲ့ဒီနေ့ပဲသူမတိုက်ခန်းက ပစ္စည်းတစ်ချို့ကို သယ်ယူရွှေ့ပြောင်းကာ စနေနေ့မှာ သူနဲ့ ကျွန်မတို့ ရုံးတတ်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြသည်။ ဘာကြောင့် ကျွန်မသူခိုင်းတာတွေမငြင်းဆန်မိပါလိမ့် ။ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ခြိမ်းခြောက်ထားလို့မဟုတ်တာတော့သေချာသည်။ လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ အသိသက်သေလုပ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေဆရာမနှစ်ယောက်ကို မုန့်ကျွေးကာ အိမ်ပြန်ပို့ပေးသည်။ ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ကြသည်။
အိပ်ခန်းထဲမှာနှစ်ယောက်သား တိတ်ဆိတ်နေရင်းက သူက ကျွန်မကို အိတ်တစ်လုံးပေးသည်။ မင်းအတွက်မင်္ဂလာဦးလက်ဆောင်……… အိတ်ထဲက ထုတ်ကြည့်တော့ခွေးလည်ပါတ်လေးတစ်ခု..။ အနက်ရောင်ခွေးလည်ပါတ်လေး ။ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာလည်းပါတယ်။ ကျွန်မကို ဇနီးမယားတစ်ယောက်အဖြစ်အပိုင်သိမ်းလိုက်ကတည်းက သူစိတ်ကြိုက်ပုံသွင်းတော့မယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ ကျွန်မအဲ့လည်ပတ်ကို ကျွန်မလည်ပင်းမှာပါတ်လိုက်တယ်။ မင်းနဲ့လိုက်တယ်……။ ကျေးဇူးပါ… တိုးတိုးလေး မဲ့ပြီးပြောလိုက်မိတယ်။ အများအမြင်မှာ မင်းနဲ့ငါက လင်မယားဆိုပေမဲ့ မင်းကိုငါက ကျွန်တစ်ယောက်လိုပဲသတ်မှတ်တာ။ မင်းငါနဲ့ တစ်တန်းထဲ ငါမခေါ်ပဲမထိုင်ရဘူး။……. ပြောပြီးကျွန်မကို ခုတင်ပေါ်က တွန်းချတယ်။ကျွန်မလူးလဲထပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာမိန်းမထိုင်လေးထိုင်လိုက်တယ်။ သူကထပ်ပြောတယ် မင်းအဲ့လည်ပါတ်ကို ကျောင်းသွားတဲ့အချိန်ကလွဲပီး အမြဲတမ်းဝတ်ထားရမယ်…..အဲ့တာမင်းရဲ့အမှတ်အသားပဲ…….ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်………..။
သူက ကျွန်မနေထိုင်ရမဲ့ ပုံစံကို တစ်ခုချင်းစီပြောပြနေသည်။ အားလုံဟာ ကျွန်မကို နှိမ်ချသိမ်ငယ်စေနိုင်တာတွေချည်းပင်။ ကလင်ကလင် ………… ဖုန်းဝင်လာသဖြင့် သူဖုန်းထပြောသည်။ ပြီးတော့ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေခေါ်နေလို့ ခဏသွားလိုက်ဦးမယ်။ ငါပြန်လာလို့ ငါပြောထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ရင်တော့ ကြိမ်းလုံးစာမိမယ်မှတ်…………..။ ပြောပြီးသူထွက်သွားသည်။ လူရောစိတ်ပါပင်ပန်းနေသည်မို့ ကျွန်မရေချိုးလိုက်သည်။ ရေချိုးပြီးတော့ သူရွေးပေးထားတဲ့ အဝတ်တွေထဲက တစ်စုံကို ထုတ်လိုက်သည်။ အဝါရောင် ရင်စေ့လက်ပျက်ကလေး။ အောက် အတွင်းခံ မပါပဲ အကျီထဘီကို ဝတ်ဆင်လိုက်သည်။ တင်းတင်းရင်းင်းရှိသော ဝတ်စုံလေးက သူမအလှတရားအားလုံးကို မက်မောဖွယ်ဖော်ပြနေသည်။ အိမ်အောက်ကတံခါးစောင့်ပိတ်သံနဲ့ အတူ မင်းထင်ပြန်ရောက်လာခဲ့သည်။ ကျွန်မလဲ သူ့အခန်းရှိရာကို ဝင်လိုက်သည်။ သူက ကျွန်မပုံစံကို ကြည့်ရင်း ပြုံးသည်။ ဟဲ့ကောင်မ ငါ့ခြေအိတ်တွေကို လာချွတ်ပေးစမ်း…….. အသံက နည်းနည်းထွေနေသည်။
ယဉ်ယဉ်ကြောက်ကြောက်နဲ့ သူ့ခြေရင်းမှာ ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ရင်း ခြေထောက်ကို ကိုင်လိုက်တော့ ရွှမ်း…….အ တင်ပါးအိအိပေါ် ကြိမ်လုံးကျလာချင်းပင်။ လက်နှစ်ဖက်လုံး နောက်ကို ပစ်ထား ပါးစပ်နဲ့လုပ် ဟုတ်ကဲ့ရှင့်…….. ပြောပြီး လက်သွယ်သွယ်လေးတွေကို နောက်ဘက်ပစ်ကာ သူ့ခြေအိတ်တွေကို ပါးစပ်နဲ့ ကိုက်ပြီး ခက်ခဲစွာချွတ်ပေးရစည်။ ခြေအိတ်တွေကို ချွတ်ပြီးတော့ ခြေထောက်ကို လျှာနဲ့ရက်ခိုင်းပြန်သည်။ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကလည်း ရင်သားတွေကို ပွတ်သပ်ကစားနေသည်။ နောက်တော့သူကျွန်မကို ဆွဲထူကာ လက်ပြန် လက်ထိပ်လေးနဲ့ ခတ်လိုက်သည်။ ရင်စေ့အင်္ကျီလေးကို ကျယ်သီးတွေဖြုတ်ကာ ရင်သားတွေကို ပွတ်သပ်ကစားနေသည်။ ပြီးတော့ ထဘီကို ဆွဲချွတ်လိုက်ကာ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွန်းလှဲလိုက်သည်။ မကြာခင် မော်တာလည်သံနှင့်အတူ ကျွန်မရဲ့ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေအပေါ် တုန်ခါစက်တစ်ခု လည်ပါတ်နေသည်။ အပြင်းအထန် ဖိစီးလာသောခံစားမှုကြောင့် ကျွန်မ ထွန့်ထွန့်လူးကာ ပါးစပ်က အော်ဟစ်ညည်းညူနေမိသည်။ အားရအောင်ကလိပြီးမှ ဆွဲထူကာ ကျွန်မရဲ့ပါးစပ်ထဲ သူ့လိင်အင်္ဂါကို ထိုးထည့်ကာ ပါးစပ်ကို ဆက်ဆံပြန်သည်။
ရွံ့ရှာမိပေးမယ် ကျွန်မရုန်းလို့လည်းမရ ငြင်လို့လည်းမထူး။ မကြာခင်မှာပဲ ပြစ်ချွဲချွဲအရည်တွေ ကျွန်မပါးစပ်ထဲပည့်လျှံသွားသည်။ ထွေးထုတ်လိုက်ချင်ပေမဲ့။ သူ့လိင်အင်္ဂါကြီးစို့ထားတော့ အခွင့်မသာ။ ကျွတ်မှိတ်မျိုချနေရသည်မို့ ပျို့ပျို့တတ်လာသည်။ တန်ဖိုးထား၍ ယူခဲ့သည်မှမဟုတ်ပဲ။ ငရဲရဲ့ အရသာကို ကျွန်မတစ်ညလုံး ခံစားခဲ့ရသည်။ မနက်ခင်းဟာ နေရောင်နဲ့အတူ တောက်ပစွာလင်းသစ်လာပြန်ပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့မို့ အိမ်ထောင်ရှင် အသစ်စက်စက်လေး ယဉ်ယဉ်နွယ် အိမ်အလုပ်တွေကို လုပ်နေရသည်။ လည်ပင်းမှာ မင်းထင်ပါတ်ပေးထားတဲ့ လည်ပါတ်က ချလူသံတစ်ချွင်ချွင်နှင့်………။ မနက် ၈နာရီထို့းပြီမို့ အိပ်ခန်းဝသို့သွားကာ တံခါးခေါက်လိုက်သည်။ အထဲမှာ လှုပ်ရှားသံကြားလိုက်သည်မို့ တံခါးဝမှာ ဒူးထောက်ကာထိုင်ချလိုက်ပြီး ခေါင်းငုံ့ထားလိုက်သည်။ မကြာခင်မှာ တံခါးဖွင့်သံနှင့်အတူ မင်းထင်ထွက်လာသည်။ သူမကို ဂရုမစိုက်ပဲ ထွက်သွားသည်။ သူထွက်သွားမှ ယဉ်ယဉ် အိပ်ခန်းတွင်းသို့ဝင်ကာ အိပ်ယာသိမ်းတာ အခန်းရှင်းတာတွေလုပ်ရသည်။ သူမဟာ သူယူထားတဲ့ ဇနီးမယားဆိုပေမဲ့ ကျွန်လို ပြည့်တန်ဆာလိုသာ ဆက်ဆံခံရတဲ့အပေါ်တော့ဝမ်းနည်းမိသည်။ တနင်္ဂနွေည……. တံခါးခေါက်သံကြောင့် ကျွန်တော်ဖတ်လက်စစာမျက်နှာကို အမှတ်အသားလုပ်ကာ စာအုပ်ကို ပိတ်လိုက်သည်။
ဝင်ခဲ့………ကျွီကနဲတံခါးဖွင့်သံနှင့်အတူ ဝင်လာသူ ယဉ်ယဉ်နွယ်…….. အနီရောင် ဝမ်းဆက်လေးနဲ့ သူမသိပ်လှနေသည်။ တင်းကျစ်နေအောင် ဝတ်ထားသော ယဉ်ဖုံးအင်္ကျီအောက်က အရာလေးကြောင့် သူမကျွန်တော့်အမိန့်ကို နာခံကြောင်းသိနိုင်သည်။ နောက်လည်ပါတ်လေး။ လမ်းလျှောက်တိုင်း ချလူသံတစ်ချွင်ချွင်နှင့်……။သူမ ကျွန်တော့်ခြေရင်းမှာ မိန်းမထိုင်လေး ကျိုးနွံ့စွာထိုင်နေသည်။ သူမကို ကြည့်ရင်း ဘယ်လို နှိပ်ဆက်ရမလဲအကြံထုတ်နေမိသည်။ နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ည ၈း၀၅နရီ။ သူမညတိုင်း ကျွန်တော့်ဆီလာရမယ့်အချိန်က ၈နာရီတိတိ………….။ ရပြီ….. သူ့ကို ဘာလုပ်ခိုင်းရမလဲသိသွားပြီ။ ၅မိနစ်နောက်ကျတဲ့သူမကို ထိုင်ထအခါ ၅၀လုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ရိုးရိုးတန်းတန်းတော့ မဟုတ်။ သူမထမိန်အောက်က အဖုတ်ပေါ် တုန်ခါစက်လေးတပ်ကာ ခလုတ်ဖွင့်ပြီး လုပ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ တုန်တုန်ရင်းရင်နဲ့ ထိုင်ထလုပ်နေတဲ့ ဆရာမလေးရဲ့ မြင်ကွင်းဟာ အရက်နဲ့မြည်းလို့ကောင်းပါတယ်။
ထိုင်ထအခါ ၅၀အပြီးမှာ သူမ အရုပ်ကြိုးပျက် ထိုင်ရက်လေးဖြစ်သွားခဲ့သည်။ သူမအင်္ဂါဝကို သူမလက်ကလေးနဲ့ အုပ်လို့။ မျက်နှာလေးရှုံမဲ့ကာ ညည်းညူနေရှာသည်။ မင်းအဝတ်အစားတွေ အကုန်ချွတ်လိုက်…….။ တုန်တုန်ယင်ယင်နဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ အပြီးမှာ သူမ ဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်သွားပါသည်။ တုန်ခါဆက်ကလေးကိုဖြုတ်ပြီး သူမရဲ့ အရည်တွေရွှဲနေတဲ့ အင်္ဂါဇာတ်ကို ဖောင်းကနဲ့ပင့်ရိုက်လိုက်သည်။ သူမအား….ကနဲညည်းညူသံကြောင့် ကျေနပ်မိသည်။ ပြီးတော့သူမလည်ပါတ်မှာ သံကြိုးတပ်ကာ ခြံထဲသို့ဆွဲခေါ်သွားလိုက်သည်။ ကျွန်တော်ဆွဲခေါ်ရာနောက် လေးဘက်ထောက်း လိုက်လာရှာတဲ့သူမကို ကြည့်ရင်း ကျွန်တော်ပြုံးမိသည်။ ဒီလိုကျတော့လည်း လိမ္မာသား အပိုးကို ကျိုးလို့။ ခြံထဲက အပြင်လူမမြင်နိုင်တဲ့ ထောင့်ချိုးလေးနာက သစ်ပင်ထိဆွဲခေါ်သွားပြီး ကြိုးကို သစ်ပင်မှာ ချည်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ခွက်တစ်ခုကို လေးဘက်ထောက်နေတဲ့ သူမရှေ့ချကာ မုန့်ခြောက်အပိုင်းလေးတွေကို ခွက်ထဲထည့်ပေးလိုက်သည်။ စားစမ်း……….ကောင်မ သူမလေးဘက်ထောက်ရပ်က မော့ကြည့်သည်။ မျက်ရည်ဝဲနေတဲ့ သူမရဲ့မျက်ဝန်းတွေက သူမဘယ်လောက်ဝမ်းနည်းနေကြောင်းဖော်ပြနေသည်။
လက်မောင်းသွယ်သွယ်ကြားက လှမ်းမြင်နေရသည့် သူရဲ့ ရင်သားပြည့်ပြည့်တွေက စိတ်ကြွစရာ။ ကျွန်တော်သူမနားထိုင်ချကာ သူမရဲ့ ဘယ်ဘက်ရင်သားကို အားကုန်စုပ်နယ်လိုက်သည်။ သူမနာကျင်သွားရုန်းကန်သည်။ ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်း…….. ဖျန်း………… ခပ်မာမာပြောပြီး သူမရဲ့တင်ပါးကို အားကုန်ရိုက်ချလိုက်သည်။ စားလေ နင့်ကိုစားလို့ပြောနေတယ် ခွေးလိုစား……. တင်ပါးကို ဆက်တိုက်ရိုက်ပြီး အမိန့်ပေးတော့သူမ မျက်ရည်ကျနေသော မျက်နှာလေးက ခွက်နားတိုးသွားကာ ခွေးတစ်ကောင်လိုစားသောက်နေသည်။ ကျွန်တော်သူစားနေတုန်း အပေါ်ထပ်တပ်ကာ ပစ္စည်းနှစ်ခု တတ်ယူလိုက်သည်။ ပြန်ရောက်တော့သူမစားပြှီးသွားပြီ။ တော်တယ်……. ပြောပြီးသူမရဲ့မေးစေ့ကို ခွေးလေးတစ်ကောင်ကို ချော့မြူနှစ်သိမ့်ပေးသလို ပွတ်သပ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့သူမကို မြေပေါ်တွန်းလှည်းကာ လက်တွေကို ကွေးပြီး လက်ဖြန်နှင့်လက်မောင်းကို ပူးကာ တိပ်နှင့်ပတ်လိုက်သည်။
ခြေထောက်တွေကိုလဲထိုအတိုင်းပင်။ ပြီးတော့ နောက်ပစ္စည်းတစ်ခုကို ထုတ်လိုက်သည်။ ခွေးမြီးပုံစံလေးတပ်ထားတဲ့ဖင်ပိတ်တစ်ခု။ ထိုအရာလေးမြင်တော့ မျက်လုံးမျက်ဆံပြူးပြီးရုန်းရှာသည်။ သို့သော်မလွတ်နိုင်ပါ။ လက်ကောခြေပါသုံးမရတောင်အတုပ်ခံထားရသည်လေ။မကြာခင်မှာပဲသူမ အမြီးပေါက်သွားသည်။ လေးဘက်ထောက်လိုက်။ တတောင်ဆစ်တွေ ဒူးတွေအနာခံကာသူမလေးဘက်ထောက်ရှာသည်။ ကျွန်တော်သူ့ပါးစပ်နားခြေထောက်ထိုးပေးလိုက်သည်။ ခွေးတစ်ကောင်လို သူမယက်ရှာပါသည်။ တော်တယ်……လို့ပြောပြီး သူမတန်ဖိုးထားတဲ့ဆံပင်တွေကို ခြေထောက်နဲ့ထိုးဖွကာ သူမကို ဒီတစ်ညအတွက် ဒီမှာပဲ ထားခဲ့လိုက်တော့သည်………ပြီးပါပြီ။